Date: 25 janvier 2018 - 13:46
Tsy hay adinoina, misy fotoana hahatsiarovana azy ary mbola tia azy foana na dia efa ela aza izany... Nifandray tsy nampoizina, samy manana ny fiainany avy ary hay samy mbola tia, te-hihaona, te-hiaraka indray!
Fantatra fa voarara, nefa toa tsy mety fa tena mbola tia be...
Re: Première amour
Date: 25 janvier 2018 - 14:20
Ny lalana ara-panjakana tsy mahalala afa-tsy voasoratra ihany. Ny fiaraha-monina mitovitovy @zay ihany miampy izay hitan’ny masony ihany. Ianao sy ilay olon-tiana no mahalala ny fihetseponareo sy ny hoe izy no nisantatra anao. Raha ny sitrapon’A/tra dia ilay nisantatra no izy ary tokony ho izay mandrapahafaty. Dia ny tsirairay samy miereitreritra hoe ny lalana izay nataon’olombelona ve sa A/tra izay namorona.
Par: poizina be
Date: 25 janvier 2018 - 15:34
vérité#légalité >>> Aza manapoizina tokatrano sy fanahin'olona fa samihafa ny natambatr' Andriamanitra sy ny nitambatambatra ho azy tao anaty fahavetavetana
mbola_tia >>> Misy ilay fiteny hoe decision ny fitiavana fa tsy fihetseham-po. Ny iainanao @ io olona io fihetseham-po. Mety foana ny TSY miaraka @ io olona io rehefa hainao ny maka decision hentitra hoe hitia ny vadinao.
Date: 25 janvier 2018 - 15:53
Samy efa manana ny fiainany izany , efa tsy mety intsony ,
Date: 25 janvier 2018 - 16:24
aleo tsy miteniteny mananatranatra
fiainana daholo izany
maha lasa -mitapy karazan'olona ny tsy miaina ny fitiavany mitempo ao ampony
jereo fotsiny ny manondidina anareo dia fantaro na dia kely fotsiny aza ny tantaram-piainany
Date: 14 février 2018 - 00:06
mbola_tia >>>>>> Izy anga no nandavaka an'ity? Fantaro fa efa manana tokatrano izy, mody mieritreritra an'ty fa efa ny toka-tranony no zava-dehibe aminy, avelao izy handamina ny toka-tranony, ny an(ty no efa tsy ho vanona ka mitady ho ny azy indray no ravana, tatezo ny an'ty sy ny lavak'ty nogoahiny, avelao izy azafady.
Date: 14 février 2018 - 06:12
tena marina alu zan e!!!
Date: 26 février 2018 - 16:02
omeo azy ho lavahany indray ny derika e